Wax Ka Ogoow 30-ka Waddan Ee Ugu Sarreya Dhanka Wax Akhriska, Iyo Soomaaliya Kaalinta Ay Kaga Jirto | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Wax Ka Ogoow 30-ka Waddan Ee Ugu Sarreya Dhanka Wax Akhriska, Iyo...
Akhrintu waa dabeecad wanaagsan oo uu ilaahay ku manneystay banii Aadamka, eraygii ugu horreyay ee lagu yiraahdo Nabigeena SCW wuxuu ahaa “Akhri”, taas oo muujineysa muhiimadda iyo ahmiyadda uu leeyahay wax akhrisku.
Dunida, waddan ba waddanka uu ka akhris iyo dad wanaagsan yahay ayuu ka hormar iyo hiigsi fog yahay, sidaa darteeda waxa aan idin soo gudbinaynaa waddamada Adduunka iyo saacadaha ay dadkooda wax akhriyaan todobaadkii.
Waa isku cel celis, ee ma ahan qof walba oo waddamadaas ka tirsan in uu todobaadkii intaas wakhti wax akhriyo, su’aasha iswaydiinta mudan ayaa ah talloow Soomaaliya kuma jirtaa?, haddaba ka dhex raadi liiska hoose ee ay ku qoran yihiin waddamada ugu wanaagsan dhanka wax akhriska.
SAACADAHA AKHRINTA TODOBAADKII IYO QOF WALBA
1. India — 10 Saacadood, 42 Daqiiqo, ayuu qof walba u fadhiyaa akhrin, waxaynna sidaas ku muteysatay kaalinta koobaad ee kala sareynta shaxdan.
2. Thailand — 9: Saac24, Daqiiqo
3. China — 8:00 Saacadood
4. Philippines — 7:Saacadood iyo 36-daqiiqo
5. Egypt — 7:Saacadood iyo 30 Daqiiqo
6. Czech Republic — 7:Saacadood iyo 24 Daqiiqo
7. Russia — 7:saacadood 06 Daqiiqo
Soomaaliya waxa ay kujirtaa kaalmaha ugu hooseeya waddamada ugu badan ee wax akhriya, waxayse liiska sare ka hoggaaminaysa waddamada aan akhriska laga xiiseyn maadaama ay yihiin dad hadal ama (Oral Society)
Waxaa qalinka u qaatay oo tarjumay Cabdiwahaab Axmed Cali